၂၀၂၁ အတွက် အကောင်းဆုံး နှင့် အပေါ့ပါးဆုံး printer လေးများ – eazycorner
Feb 9, 2021 2021 popular printer, 2021 protable printer, portable printer, printer
တစ်ခုခုကိုလုပ်တော့မယ်မယ်ဆို ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်များအတွက် print ထုတ်ဖို့လိုအပ်နေပီလေ။ လုပ်ငန်းတွေမှာပဲ သုံးသုံး၊ interview မသွားခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ resume (or) CV form တွေကိုပဲ ထုတ်ထုတ်၊ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံလေးတွေပဲ ထုတ်မလား။ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ပြီး နေရာတကာကို အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးခရီးဆောင် ပရင်တာများကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
1. Canon Pixma iP110 portable printer
Size: 32.2 x 18.5 x 6.2cm (12.6 x 7.3 x 2.5 inches)
Speed:9pages per minute (black and white);6pages per minute (colour)
ink cartridges ငါးခုကို အသုံးပြုပြီး 9,600 dpi resolution ဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ဘက်ထရီ သို့ power နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Print ထုတ်ရာတွင် Wi-Fi သို့မဟုတ် ကေဘယ်လ်ဖြင့် ထုတ်နိုင်သည်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို သယ်သွားနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသည့် Printer အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
အားသာချက်ကတော့ ‘Save Black Ink Mode’ ကို အသုံးပြုနိုင်သည့် settings ကိုပါဝင်ပြီး အနက်ရောင်မင်ကုန်သွားလျှင် အခြားရောင်စုံမှင်မှ ပေါင်းစပ်အနက်ရောင်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
Size: 36.3 x 17.8cm x 6.8 (14.3 x7x 2.7 inches)
Weight: 2.5kg (4.4lbs)
Speed:9pages per minute (black and white),7pages per minute (colour)
HP OfficeJet 200 သည်4Colors ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော print ထုတ်ယူနိုင်ရန်အတွက် နှစ်ခုပါသည့် cartridge စနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ တပ်ဆင်အသုံးပြုရာတွင်အလွန်လွယ်ကူပြီး ဘက်ထရီ သို့ power နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Print ထုတ်ရာတွင် smart phone, laptop မှ Wi-Fi သို့မဟုတ် USB cable, USB flash drive မှတဆင့်လည်း ဖြင့် ထုတ်နိုင်သည်။
ပုံမှန်စက္ကူ၊ စာအိတ်နှင့် ဓာတ်ပုံစက္ကူ A4 size ထိသာ print ထုတ် နိုင်သည်။ HP Fast Charge ဖြင့် ပရင်တာအား မိနစ် ၉၀ အားသွင်းနိုင်သည်။ ၎င်း၏ ထူးခြားချက်ကတော့ print ထုတ်တဲ့အခါ ငြင်သာစွာထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Size: 30.9 x 15.9 x 6.1cm (12.1 x 6.2 x 2.4 inches)
Speed: 14 pages per minute (black and white), 11 pages per minute (colour)
Epson WorkForce WF110 သေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသည်။ 1.6 kg အလေးချိန်ရှိပြီး print ထုတ်ရာတွင်လည်း အထက်ပါ printer များထက် ပိုမို လျှင်မြန်သည်။ စက်တွင် ပါဝင်သည့် ဘက်ထရီသည် စာမျက်နှာ ၅၀ ကိုပုံနှိပ်နိုင်ပြီး 410 အထိပုံနှိပ်ပေးနိုင်သည့် ပြင်ပဘက်ထရီတစ်ခုကိုလည်း ထပ်မံဝယ်ယူနိုင်သည်။
4. Brother PJ-773 A4 Thermal Mobile Printer
Size: 25.4 x 5.6 x 3cm (10 x 2.2 x 1.2 inches)
Weight: 1.6kg (1.1lbs)
Brother PJ-773 A4 Thermal Mobile Printer သည် အဖြူနှင့် အမဲရောင် printer အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်ကတော့ ရိုးရိုး စက္ကူစာရွက်နှင့် print ထုတ်လို့မရနိုင်သလို၊ အားသာချက်ကတော့ မှင်ထည့်ဖို့လည်း မလိုအပ်တော့ပါ။ special thermal-reactive စက္ကူ အမျိုးအစားကိုသုံးရပြီး စက္ကူစျေးလည်း တော်တော်ကြီးပါသည်။
Size: 18.1 x 13.6 x 6.3cm (7.1 x 5.3 x 2.5 inches)
Speed: 47 seconds per print
Max print size: 148 x 100mm (postcard size)
ဓါတ်ပုံများကို ကဒ်အရွယ်အစား သို့ ပိုသေးသောပုံများသာ print ထုတ်လို့ရပါသည်။ ၈၆၀ ဂရမ်သာရှိပြီး အလွန်ပေါ့ပါး၍ သယ်ရလွယ်ကူသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ဓါတ်ပုံအရည်အသွေးများကို ထုတ်ပေးနိုင်သည့် sublimation printer အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ကင်မရာများ နှင့် စမတ်ဖုန်းများအပြင် SD ကဒ်နှင့် USB flash drive များမှ တိုက်ရိုက် print ထုတ်နိုင်သည်။
CP1300 သည် power (or) battery နှင့်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Wi-Fi Button ကို အသုံးပြု၍ Wi-Fi ချိန်ညှိချက်များကို လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဓါတ်ပုံအရွယ်အစားများကိုပါ ချိန်ညှိ၍ ထုတ်နိုင်ပြီး၊ စမတ်ဖုန်းများစွာမှ ရုပ်ပုံများကို အခြေခံ၍ collages များကို print ထုတ်ပေးနိုင်သည့် ‘Party Shuffle’ များ ပါရှိသည်။
6. Canon Selphy Square QX10
Size: 10.22 x 14.33 x 3.1cm (4 x 5.6 x 1.2 inches)
Speed: 43 seconds per print
Max paper size: 68 x 68mm (2.7×2.7in)
ခရီးသွားရပြီး မှတ်တမ်းတင်ချင်သူများအတွက်ကိုသာ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင် Canon Selphy Square QX10 printer အမျိုးအစားကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ ပုံအရွယ်အစား ၆၈ x ၆၈ မီလီမီတာစတုရန်း ပုံအရွယ်အစားကိုသာ ထုတ်နိုင်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သောစတစ်ကာများဖြင့် print ထုတ်နိုင်ပါသည်။
ပုံကို နှစ် ၁၀၀ ကြာအောင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် Smudge-water, water-protected coating ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ခါအားသွင်းထားလျှင် ပုံအရေအတွက် ၂၀ ထိထုတ်ယူနိုင်ပြီး photo အတွင်း ဘောင်များ၊ စာသားများ၊ filter လုပ်နိုင်သည့် စနစ်များကိုပါ ထည့်သွင်းပေးသည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့အတွက်ကြောာင့် လက်ဆွဲအိတ်၊ ကျောပိုးအိတ် ဂျာကင်အင်္ကျီအိတ်ကပ် သို့ လက်ကိုင်အိတ်ထဲတွင်သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်အထိ ပေါ့ပါးသေးငယ်၍ အဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။
credit by: creativebloq